Mogadishu Journal » 2019 » October » 15
Taliyeyaasha qaar ee Saldhigyada oo xilalkii laga qaaday
Mjournal :-Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa xilka ka qaadis iyo Magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Booliska ee ka howlgalla Magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa taliyeyaasha qaarkood u magacaabay xilal Sare halka kuwana xilalka...
Mjournal :-Rag hubeysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay, islamarkaana qiyaatsii tobaneeyo kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliska sheegeen Isniintii. Weerarkan ayaa qiyaastii 1-dii aroornimo ee sabtidii ka dhacay xaafadda Obno...
Dowlad Carbeed oo taageertay howlgalka Milatari ee Turkigu ka wado gudaha Siiriya
Mjournal :-Ciidamada milatariga Turkiga ayaa howlgal kawada Waqooyiga dalka Siiriya si ay halkaasi uga saaraan xoogaga hubeesan ee kurdiyiin oo lagu eedeeyay in ay halis ku yihiin amaanka dalka Turkiga. Howlgalka Turkiga ayaa cambaareeyn xoogan kala kulmay wadamo badan oo Carbeed...
Finance Minister Abdirahman Beileh has torn into the recently released report by the Auditor General citing inaccuracies and failure by the Office of the Auditor General to seek audience with the Ministry before releasing the report. In rejoinder seen by HOL, Beileh raises...
Khamri lagu qabtay degmada Dhuusa-Mareeb ee gobolka Galguduud
Mjournal :-Magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa lagu qabtay khamri badan oo halkaasi si sharci daro ah lagu geeyay magaaladaas in laga ganacsado. Ciidamada amaanka ayaa gacanta kusoo dhigay khamriga iyo dadkii ka ganacsanayay, waxaana maanta khamrigaasi lagu...
Madaxweynaha K Galbeed oo la kulmay wafdi ka socda Hay’adda IOM
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta gareen) ayaa Xafiiskiisa Maanta ku qaabilay Wafdi uu Hogaaminayay Madaxa Hay`adda IOM Bariga iyo Geeska Africa Mohammed Abdiker oo Baydhabo gaaray. Kulan ay ku yeesheen Xarunta...
Dagaal dhex-maray Ciidamada dowaldda & Al-Shabaab
Mjournal :-Wararka laga helayo deegaano hoostaga degmada Xudur ee Xarunta gobolka Bakool ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi xalay uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyey Ciidamada dowladda iyo Ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid, kadib markii Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen...
Axmed Madoobe “Wada hadal iyo dib u heshiisiin diyaar baan u nahay cid walba oo wax tabaneysa…”
Mjournal :-Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa mar kale ku celiyay inuu diyaar u yahay wada hadal iyo dib u heshiisiin lagu xaliyo cid walba oo wax ka tabanaysa. Isagoo xalay ka hadlayay munaasabad lagu sagootinayay wafuudii ka qeyb gashay caleema...
Wada-hadallo Hoose oo u socda Dowladda Federaalka iyo Ahlusunna
Mjournal :-Hoggaanka sare ee Maamulkii Ahlusunna ee ku biiray Maamulka Galmudug ayaa dhawaan qaadacay guddiga farsamada iyo dhismaha Maamulka Galmudug oo ay dhawaan Magacaawday Wasaaradda Arrimaha gudaha Soomaaliya,waxaana taasi ay sababtay in xubnaha Guddiga oo Muqdisho ku sugan...